“ နှစ်သစ်ကူးညမှာ ဆုတောင်းတိုင်း ပြည့်မယ်ဆိုရင် သင့်အဖြစ်ချင်ဆုံး ဆန္ဒက ”
တစ်ဦးတည်းသာ ကျန်ရစ်သော မေမေ့အား ကျေးဇူးဆပ်ခွင့် အမှန်အကန်ကို မသေခင်လေးရပရစေ
လမ်းခွဲစကား စပြီးပြောခဲ့ပေမယ့် ခုထိချစ်နေသေးတယ်ဆိုတာ ချစ်သူကောင်လေးသိပါစေလို့ပေါ့
Post By : သက်ဇွန်
မဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ဆုတောင်းတိုင်သာ ရခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော် ကိုကိုရဲ့ အနားမှာနေခွင့်ရတဲ့ ဇနီးကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါရစေပေါ့
Post By : ကိုကိုနှင်း
I wanna to come back Myanmar.
Post By : emo.badboy
နှစ်သစ်မှာ အထီးကျန်တဲ့လူတစ်ယောက် မဖြစ်ပါရစေနဲ့လို့လေ... :(
အိမ်မက်ချစ်သူ 2007 ခုနှစ် တရုတ်နှစ်သစ်ကူးနေ့မှာ စပြီးချစ်ခဲ့ရတဲ့ ကျွှန်မ အိမ်မက်ချစ်သူ ကျွှန်မ အချစ်တွေ နားလည်ပေးနိုင်လို့ ပြန်လှည့်လာဖို့ အမြဲဆုတောင်းနေပါတယ်...
ဆုတောင်းတိုင်းပြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ တကယ်ကိုကောင်းမှာဘဲ ဒါပေ့မယ်ကျွန်တော်သိနေတယ် ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကဘယ်လိုမှ အကောင်းအတိုင်းဖြစ်လာတော့မှာမှမဟုတ်တာ မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုကိုတော့ ဆုတောင်းမနေတော့ပါဘူး
Post By : ကိုသက် (ခ)lwenwai
Post By : သတ်တန့်လေး(rainbowhtun2009@gmail.com)
မိုးစက်ကတော့အောင်မြင်မှုတွေအများကြီးပိုင်ချင်တယ်။မိုးစက်ရဲ.ရည်မှန်းချက်က အင်္ဂလိပ်စာနည်းပြတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ပါတယ်။နောက်ပြီးကျော်ကြားတဲ့စာရေးဆရာတစ် ယောက်ဖြစ်ချင်တယ်။ဘ၀မှာပြီးပြည့်စုံချင်တယ်အရာရာတိုင်းပေါ့။
ှုI want to come back myanmar =(
Post By : thinzar
I want to get peaceful life with my family and my lover and the person who I love .
Post By : chit myo zin zin
i ko tat kal chit tae lu , i ko narr lal pay naing mae lu nae twae ra par sae
Post By : နှင်းဆီဖြူ
Post By : poemflower9
Post By : မျော်လင့်မိသူ
i ချစ်သူသည် ပျော်ရွှင်နေသောလူသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အထီးကျန်ခြင်းနဲ့ကင်းဝေးနိုင်ပါစေ။
I want to stay right beside my girlfriend forever.
Post By : အကြနာ
ဆုတောင်းတိုင်းသာပြည့်မယ်ဆိုရင်...... မိဘနှစ်ပါးနဲ့ ကိုယ့်အပေါ်ကျေးဇူးရှိခဲ့ တဲ့ သူတွေကိုကျေးဇူးပြန်ဆပ်နိုင်ပါစေ.. လို့ ဆုတောင်းချင်တယ်....
Post By : နားလည်ရခက်တဲ့ ကောင်မလေး(moechittaegirlay^^^)
နှစ်သစ်ကူးညမှာ ဆုတောင်းတိုင်းသာတကယ်ပြည့်မယ်ဆိုရင် ရည်းမှန်းထားတာတွေကို လက်တွေ့ တကယ်အသုံးကျရပါစေလို့ ဆုတောင်းချင်ပါတယ် ၊နောက်တခု သူပျော်ရွှင်ပါစေထာဝရ
Post By : ပျိုကညာ
Post By : snowwhite 31189
ဆုတောင်းတိုင်းသာပြည့်မယ်ဆိုရင် .....ချစ်သူမျက်နှာကို ကိုယ်သာ ထာဝရ ဖူးမျှော်ပိုင်ခွင့်.......၇ပါစေ.................
Post By : သူသူ(နွေဥသြ)
ပိုက်ဆံနဲ့ပတ်သတ်လို့မပူပင်ရတဲ့သူဖြစ်ချင်တယ် လူတိုင်းလဲ မပူစေချင်ဘူး ပိုက်ဆံဟာ တခါတလေ မွန်းကျပ်ဖို့ကောင်းတယ် ပိုက်ဆံကြောင့်အားလုံးနဲ့ခွဲနေရတယ်
Post By : ဖြူသွယ်မြင့်
ဆုတောင်းတိုင်သာတကယ်ပြည့်မယ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်မြန်မြန်ပြန်ရပါစေလို့ ဆုတောင်းချင်တယ်ဒါမှချစ်သူနားမှာနေခွင့် ရမှာလေ
မောင် နဲ့ မြန်မြန် နီး၇ပါစေလို
Post By : sandar
ဆုတောင်းတိုင်းသာပြည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင် လူသားအားလုံးအတွက် ပျော်စရာကောင်းမှာပါ...ခုဆုတောင်းရင် ခုဖြစ်ပါ့မလား...ဒါမှမဟုတ် နောက်ဘ၀ဆိုတာများရှိခဲ့ရင် ကျွန်တော် တော့်တွေဘာလုပ်သင့်လဲ...ဘ၀တဆစ်ချိုးမှာ ရင်နာစရာ အဖြစ်ကလေးမျိုးတွေ လူတိုင်းတော့ကြုံတွေ့ဖူးမယ်ထင်ပါတယ်...ဒါပေမဲ့ တကယ်တမ်းကြုံတွေ့တဲ့အခါ အဖြေဆိုတာရှာရခက်ပါတယ်......
Post By : thantkoko
"sandi" ko "wai "a yin lo pyan chit par say loe
Post By : sandi
may he be always happy...
Post By : cm
ဆုတောင်းတိုင်းသာတကယ်ပြည့်မယ်ဆိုရင် ဖူးစာရှင်အစစ်အမှန်နဲ့ အမြန်ဆုံးဆုံစည်းခွင့်ရပါစေ။ဖူးစာရှင်က သူ...ဖြစ်ပါစေလို့လည်းမျှော်လင့်မိတယ်။
Post By : ဖြိုးပု
Post By : မောင်လေး
ကိုယ်တက်ချင်တဲ့ B Med.Tech လိုင်းကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့တက်ခွင့်ရပါစေ။ကျန်တာတွေက အရေးမကြီးပါဘူး။
မိတ်ဟောင်းမိတ်သစ်များနဲ့ဆုံတွေ့ ပါ၇စေ.........။ ကြွေးဟောင်းကြွေးသစ်များလည်းဆပ်နိုင်ပါ၇စေ..................။
Post By : Jali
Post By : မဇွန်
အရာရာကို ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျ လွတ်လပ်စွာလုပ်ခွင့်ရတဲ့ဘ၀မျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ချင်တယ်။
Post By : moonlight
ဒီဘ၀မှာ....မဆုံဖြစ်ကြရင်တောင် နောင်ဘ၀မှာ .....အရင်ဆုံးနဲ. အချစ်ဆုံး..... ဘာအပူအပင်မှမရှိသော... ချစ်သူဘ၀ ကို ရရှိပါစေ.......။
Post By : momotaryaw.one
Post By : စုမြတ်နိုး
kokosty net amyan sone lat htet chin par tel
Post By : chitchit
ကိုယ်က ဥယျာဉ်လေးရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပြီးတော့ သူက ဥယျာဉ်မှုး ဖြစ်ပါစေလို့
သူ့ကို အမြန်ဆုံး မေ့ပစ်နိုင်ပါစေလို့
Post By : cry cloud
Thuapor kong the chit thuathit twe par say
Post By : su
thu koachit the
Post By : ss
Post By :ူlaypay.com
I chit thu si ka happy new year night 12:00 mar chit par tal so ta` answer ko ya kha` tar de top noung lar ma` yearS mar la` chit pa ya say lo su toung mi mar par
ဆုတောင်းတိုင်းတာပြည့်မယ်ရင် သူ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ပေးချင်တယ်။ ကိုယ့်ဟာသူ့ကိုအရာရာဖြည့်ဆည်းပေးချင်သူဆိုတာကိုလဲသိစေချင်တယ်။ ထာဝရသူတယောက်ကိုပဲသိပ်သိပ်ချစ်ချင်တယ်။
နှစ်သစ်မှာ ကျွန်တော်ဆုတောင်းချင်တာကတော့ အမြဲတမ်း ထာဝရ ကိုယ့်ချစ်သူနဲ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းချင်တယ်ဗျာ။ ဘဝနဲ ဆန္ဒတစ်ထပ်တည်းကျနိုင်ပါစေလို့ ထပ်လောင်း ဆုတောင်းလိုပါတယ်။
Post By : မောင်ရာစီ(ထားဝယ်)
Post By : iaypay@gmail.com
ko net alwaysato nay ya par say loet
Post By : laypay@gmail.com
Post By : C00L
Post By : KHINE
ဆုတောင်းလေးတစ်ခုသား တကယ်အမှန်အတိုင်းပြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာ ကျွန်တော်ချစ်တဲံမျက်ဝန်းလေးတစ်စုံနဲ့ ပြန်ဆုံချင်တယ် တစ်ခါလောက်ပြန်ဆုံမယ်ဆိုရင်တောင်ကျေနပ်ပါတယ် သူနဲ့ခဏတာတွေလည်း အဲအချိန်ခဏတာလေးကို ကျွန်တော် မြတ်နိုးတန်ဖိုးထား မိမှာပါ................။
ဘ၀ကိုငြိမ်းအေးစွာနဲ့ ဖြတ်သန်းပြီးကိုယ့် အပေါ်အရမ်းနားလည်တဲ့ ချစ်သူနဲ့ တွေ့ ပါရစေသား။
Post By : နန်းဆန်
Post By : ဘိုဘို
Post By : essentialboy101
ဘ၀မှာ ကိုယ် ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတိုင်းဖြစ်ပါ စေ လို့ဆုတောင်းမယ်
အချစ်ဆုံးသူရဲ့ အချစ်ဆုံး၁ယောက်အဖြစ် ထာဝရလက်တွဲပါရစေ။
Post By : ဟာဝိုင်အီ
ba wa mar chit tat thu nat pound ya par say & ba wa ko pyaw pyaw shin shin na twar chin tal.
Post By : InnocenceRoseSnow
ဆုံနိုင်ခွင့်ရှိရင်... ဆုံချင်တယ်......(တစ်ခ န ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့)
Post By : baby lay
ဆုတောင်းရမယ်ဆိုရင် မချစ်တက်တော့ဘူးဆိုတော့ ထားခဲ့ရက်သူရဲ.မျက်နှာကိုနောက်တစ်ခါမမြင်ပါရစေနဲ. အမေရင်းနဲ.အမြန်တွေ.ပါစေ
Post By : လွမ်း
ကျွန်တော်ဆုတောင်းမယ်ဆိုရင် မမအိမ့်ချစ်ရဲ.အချစ်ကိုမြန်မြန်ရပါစေ မမအိမ့်ချစ်ခံစားနေရတဲ့နှလုံးရောဂါကိုကုနိူင်သောဒေါက်တာမြန်မြန်ဖြစ်ပါစေ ၂၀၁၃ခုနှစ်မြန်မြန်ရောက်ပါစေ မမအိမ့်ချစ်ရဲ.ပါးပြင်ကိုပထမဆုံးနဲ.နောက်ဆုံးနမ်းနိူင်သောသူဖြစ်ရပါစေလို.
မေမေ့ ကိုလူ့ဘ၀ထဲပြန်လာစေချင်တယ် "ဖြူ" ကိုလည်း ကျွန်တော့ဘ၀ထဲပြန်လာစေချင်တယ်
အဲလို မျိုးသာ ဆုတောင်းပြည့်ခဲ့ မယ်ဆိုရင်..ကိုယ်တကယ် ချစ်ရသော ကောင်မလေးနဲ့ တစ်သက်လုံးမခွဲမခွာ ပေါင်းသင်း နေထိုင် ရပြီး..ထီ သိန်း 1500 ဆု 5ကြိမ်လောက်ပေါက်ပါစေလို့ ဆုတောင်းမိမှာ ပါ...ဟားဟားဟား..နည်းနည်း တော့လွန်လွန်း တယ်နော်။....
မောင်နဲ့ တူတူ အေးချမ်းသော ဘ၀ကိုပိုင်ဆိုင်ပြီူး ဖေဖေ အားကိုးလောက်တဲ့သမီးရတနာဖြစ်ပါရစေ
ငါ့တတ်နေတဲ့ကျောင်းပညာရေးကငါ့ရဲ့ professional ဖြစ်နိုင်ပါစေ
I can wanna love you,forever.
Post By : pppway
သူ့ဆီက အချစ်တွေအကုန်လုံးကို ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲပဲ ထာဝရ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းမယ်။ (ဖြစ်နိုင်ရင်ပေါ့)
Post By : လင်းရောင်သျှင်
Post By : ကေကေ
ကိုကရင် ကျွန်မကို လက်ခံလာပါစေလို့
Post By : ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တစ်ဦးကိုချစ်နေမိသော ဘာသာမတူသောမိန်းကလေးတစ်ဦး
သူ နဲ့ ကျွန်တော် နဲ့ စတွေ့ခဲ့တဲ့အချိန်တွေ့ကို ပြန်လိုချင်တယ်.....၊ လို့ဆုတောင်လိုက်ချင်တယ်။
Post By : ဘုန်းပြည့်
Post By :ဲJ & J
Post By : AK47
Post By : သက်ထား
သူနှင့်ဘယ်လိုမှ ထပ်မဆုံနိုင်တော့မယ့်အတူတူ အမြန်ဆုံးမေ့ပစ်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်မယ်။
Post By : ဇီဇ၀ါ
ကျပါများတဲ့ စာမေးပွဲတွေ နောက်ထပ်မရှိပါစေနဲ့လို့ (ဆေးကျောင်းတွင်ဖြစ်သည်)
၃ခုပြောမယ်နော် davidsmithရဲ့ဆေးကုသမှုကိုလည်းခံယူချင်တယ် ရေသူမလည်းခန ဖြစ်ချင်တယ် ပြေတီဦးနဲ့လည်းပင်လယ်ကမ်းစပ်မှာလက်တွဲပြီးတော့လျှောက်သွားချင်ပါတယ်
Post By : minlu
Post By : မွန်မြတ်
su tg tine pyay maw so yin Ahko Kalay si myan myan pyan lar par sa lo su tg maw dar pay mae Ahko ka Kalay si pyan ma lar toe bu lay ahko ko chit tae KALAY
Post By : KALAY
Post By : pwyh
ချစ်သော ကိုနဲ.အတူ တစ်သက်လုံးမခွဲတမ်းချစ်သွားချင်တယ်
ဘဝဆက်တိုင်းကိုယ်ချစ်သူနဲ့ပြန်တွေ့ ပါစေလို့ 
Post By : regina turner
Post By :့့
ဆုတောင်းတိုင်းသာ ပြည့်မယ်ဆိုရင် လူတွေကို ဘယ်သူမှ မသိအောင် ပြီး ဖြေရှင်းစရာမလိုတဲ့ ပြသနာ အကြီးကြီး ရှာချင်တယ်
every time ko gyi
ကျွန်တော် ဆုတွေတောင်းတိုင်း အနာဂတ်ဘ၀ လှလှလေးတွေ ဖန်တီးနိုင်ဖို့ အလုပ်တွေ မြန်မြန်အဆင်ပြေပါစေလို့ ဆုတောင်းတယ် အခုလည်း ဒီလိုပဲဆုတောင်းရမှာပေါ့
ဝမ်းသွားချင်တဲ့အခါတိုင်း ယင်လုံ အိမ်သာနဲ့ ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက် တွေ့ ရပါလို၏၊။
နှစ်သစ်ကူးညမှာ သူပျော်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းချင်တယ်
Post By : ရတီစိုး
ဆုတောင်းတိုင်းတာပြည့်မယ်ဆိုရင်... စိတ်ချမ်းသာစွာနေချင်တယ် ပျော်ပျော်နေချင်တယ် စိတ်မညစ်ချင်ဘူး
စွဲ့၊မြတ်ဆု နဲ့ သူုငယ်ချင်း ၃ ယောက်ပေါင်းရဲ့ အိမ်မက်တွေ ဖြစ်လာပါစေ...
Post By : ပန်းလေးဖြူ
ဘ၀ကို အစကနေပြန်စ မှားတယ်လို့ထင်ခဲ့တဲ့ အရာတွေ ပြန်ပြင်ချင်တယ်
Post By :ုမြတ်နိုး(မလမ)
Post By : .................
a chit khin sone ba wa ma happy chin sone be
Post By : shwe kyee
i need you! i miss you!i love you sawemin
Post By : myat noe
i want see you everyday
Post By : nga lay
I wanna to see My Dad & Mom to happy all over the world. We want to stay the whole life with my mom and dad with together until my breath last out.
Post By : Lai Lai Naing
chit thu ..khin thu ..paw par say lo naw
နှစ်သစ်ကူးညတုန်းကသူငယ်ချင်းတွေစိတ်ကောက်ကြတယ် အမြဲတန်းသူငယ်ချင်းတွေတွေနဲ့အဆင်ပြေချင်တယ် ကိုယ့်အပေါ်အမြဲနားလည်ပေးနိုင်မယ့်သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်လောက်ရချင်တယ်
Post By : စိုးလေး
၃ခုတောင်းမယ်နော်။ (၁) တို့မိသားစုတွေအမြန်ဆုံး ပျော်ရွှင်စွာပြန်လည်ဆုံဆည်းနိုင်ကြပါစေ။ (၂) လူသားအားလုံး ပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးတွေ အမြဲပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။ (၃) ကိုယ့်အပေါ်တကယ်ယုံကြည်အလေးထားချစ်မယ့်သူနဲ့ဆုံတွေ့နိုင်ပါစေလို့...
Post By : ဘေဘီဝိုင်း
နှစ်သစ်ကူးညမှာဆုတောင်းတိုင်းတာပြည့်မယ်ဆိုရင် အခုကိုယ်နဲ့ဝေးနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူနဲ့အတူကြည်နူးနေရသည်ဟုမက်သောအိပ်မက်မှ ပြန်လည်လန်နိုး နိုးထမသွားပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းမှာပါ.... လက်တွေ့ဘ၀မှာမဖြစ်နိုင်သောအရာကိုအိပ်မက်ဖြင်သာပျော်မွေ့လိုက်ချင်ပါသည်....
Post By : ဟေမာန်
I LAL THU SI KA LOVE KO LO CHIN TAL BUT THU NAE` I KA MA PYIT NAING HMAN THI THI GYI NAE` I KO KA YOUE TAR PAR
Post By : DARLI
i really possessaday that i will find him as like the same position in my dream 2008 Dec 25 04:00 AM .
Post By : dreamer
ှဆုတောင်းတိုင်းသာပြည့်မယ်ဆိုရင် သူပြန်လာဖို့မျှော်လင့်ပါတယ် ဘာအချိန်ဖြစ်ဖြစ် ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ် .................... ဘယ်သူနဲ့ ဘာတွေပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ ပြန်လာပါကွာ
Post By : ခဏခဏ ချော်လဲတက်တဲ့ကောင်မလေး
ချစ်သောသူ အားလုံးနှင့် အမြဲတမ်း ပျော်ရွှင်စွာနေနိုင်ပါစေ ။
Post By : နှင်းပွင့်ချစ်သူလေး
ဘာစောင့်လုပ် စောင့်ကိုင်မှမလုပ်ရဘဲ အကြီးအကျယ်ချမ်းသာပါစေ။
Post By : orchid
honest ရပြီတော့ mother နဲ့အတူတူ နေချင် တယ်။ နိုင်ငံခြားမှာကျောင်းတက်ချင်တယ်။
Post By : poohnge
Post By : kyaw m s
A chain timeato to shi nay chin tel.Ko nae pop.
Post By : Khaing
ကိုကို့ ဆီက အချစ်စစ် ကို ပိုင်ဆိုင်ရပါစေ။ ကိုကိုတစ်ခြား တစ်ယောက်နဲ့ ထပ်တွဲမယ်ဆိုရင်တောင် ခွင့်လွှတ်ပါတယ်။ ကိုကို့ နှလုံးသားရဲ့တစ်ထောင့်မှာ ညီမလေးရှိနေရင် ညီမလေး ကျေနပ်ပါပြီ။ ညီမလေးရဲ့ခံစားချက် တွေက်ို ကိုကို သိနိုင်ပါစေ။
Post By : ခင်ကျော့ကျော့စိုး
ဆုတောင်းတိုင်းသာပြည့်မယ်ဆိုရင် အချစ်ဆုံးနဲ့ ပေါင်းဖက်ပါရစေ........
Post By : ပိုးသား
Ko I miss you
Post By : "မ" မရှိလို့မဖြစ်တဲ့ "မောင်"
I wanna see my daddy as fast as soon
ကျွန်တော့်အမေ လူ့လောကကြီးထဲကထွက်သွားတာ ကျွန်တော့်ရဲ့အိပ်မက်ဆိုးကြီးပဲဖြစ်ချင်ပါတယ်
Post By : ဝေလင်းဦး
Happy forever with my family & friends & - - -
foreign ကို သွားပြီး ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ဘ၀တစ်ခုကို တည်ထောင်ချင်တယ်
i have only one wish that ko always happy and success in his life
Post By : anonymous
မပြည့်စုံတဲ့ လူတွေကို ရှေ့နောက်ကြည့်စရာမလိုဘဲ လှူနိုင်တဲ့လူဖြစ်ချင်တယ်
Post By : မမလေး
အလင်းနဲ့ အထွန်းတို့ အမြန်ဆုံး ဆုံစည်းနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းမှာပေါ့ဗျာ. ကျနော်တို့ ချစ်သူနှစ်ဦးက တစ်ယောက်တနေရာဆီမှာလေ
Post By : နောင်ဇာနည်ထွန်း. (ခ) အထွန်း
i wanna stay together with my beloved without parting the rest of my life.......
Post By : honey san
welcome new year........
everythin happy par say
i ko thu pyit ma thar par say nals lo pal su toung mi mar pals i thu ko shit tar ko thu yals fri twe ka i ko ma yone kyi tar twe pout par say lo lal su toung mal OK (HAPPY NEW YEAR)par fri top
Post By : achitooachitsone
ko ye khan sar chat time ko phyit see pay chin tal
သူကိုကိုယ်နဲ့အတူတူအနားမှာအမြဲရှိနေပါစေလို့...သူရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းကိုယ့်ကိုသတိနည်း နည်းလောက်ရရင်ပဲကျေနပ်မိမှာပါ ....... ကိုဇေ ရေ....
Post By : Real Life (Pyone)
နှစ်သစ်ကူးညက မောင့်မွေးနေ့ပဲ အဲတော့နှစ်တိုင်းတူတူဖြတ်သန်းခွင့်ရပါရစေလို့ ဆုတောင်းချင်မိပါတယ်
I AM VERY SORRY ON V-DAY BECAUSE I HAVE NO GIRLS FRIENDS.
Post By : SWAT
Post By : ကျော်မင်းစိုး
thu nae pat thet kae ta mya arr lone ko may`t lite chin tal.
Post By : Bertie
everything can be happy
Post By : so cute baby
chit dae thu nae ta nya lone ato too thai pi new year mhar su toung chin bar dae...ta thet lone poung zi9ja bar zay...lo pop pyar
ko chit tae thu ka pyan chit yin kg hmar p` naw
အဲဒီညကပေါ. သူလာမယ်ဆိုလို.အရမ်းမျှော်နေခဲ.မိတာ အဲဒီအချိန်မှာအလိုချင်ဆုံးဆုက သူ.ကိုရောက်လာစေချင်တာပါပဲ ပြီးတော.သူ.ကိုNEW YEAR PRESENTပေးချင်တာ သူလာပြီး သူ.ကိုပေးခွင်.ရပါစေလို.ဆုတောင်းနေမိတယ် ။ဆုတောင်းပြည်.ရင်အရမ်းပျော်မိမှာ။
Post By : Pokimon
sorry i little late,in my view i hope peaceful world and i want to see justice and peace in the world.
ကျွန်မသူ့ဆီကဖုန်းကိုမျော်နေမိခဲ့ပါတယ်။ အချိန်တွေသာကုန်သွားတယ် သူကျွန်မဆီဖုန်းမပြောနဲ့ မေးတောင်မပို့ခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်မကမေးပို့လိုက်တော့ သူကပြောပါတယ်(ပြန်ဆက်သွယ်ချင်လို့မဟုတ်ဘူး) တဲ့။ ကောင်လေးရေမင်းပေးတဲ့ ၂၀၀၉လက်ဆောင်ဆိုတာ (မင်းပေးခဲ့လို့ ငါရလိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ အချစ်ရဲ့အဓိပယ်လား?) တကယ်ဆိုသူများတွေပျော်အောင် နေနေကျတဲ့နှစ်သစ်ကူးညမှာ ငါမင်းကြောင့်တညလုံးငိုခဲ့ရတယ်။ ကျွန်မမျော်လင့်ထား၊ လိုချင်ထားခဲ့ နှစ်သစ်ကူးလက်ဆောင် ဆိုတာ တကယ်တော့မရခဲ့ပါဘူး။
Post By : ta chain ga MA( kaung lay ye` MA)
သူကအဝေးမှာလေ.. အခုထိလည်းအဆက်အသွယ်မရဘူး.. အရမ်းသတိရနေတယ်။ အဲဒါကြောင့်ဆုတောင်းတိုင်းသာပြည့်မယ်ဆိုရင် သူ့ဆီကစာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ဖုန်းနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်အဆက်အသွယ် မြန်မြန်ရပါစေလို့ဆုတောင်းမယ်။
Post By : ငှက်ကလေး(pdo)
နှစ်သစ်ကူးညတုံးက ဆုတောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ညီမ သိပ်ချစ်တဲ့ အစ်ကိုနဲ့ တစ်နေ့ကျရင် အတူနေခွင့်ရပါစေ။ ပိုင်ဆိုင်လိုခြင်းကင်းမဲ့ တဲ့ ချစ်ခြင်းမျိုးနဲ့ နောင်ဘ၀ကျရင် အစ်ကို့ကို ချစ်နိုင်ပါစေ။ အခုဘ၀ တော့ ပိုင်ဆိုင်ပါရစေနော်။
Post By : ဆောင်းနှင်းဝေ
သူ့ဆီက နှစ်သစ်ကူးဆုတောင်းစကား နှစ်တိုင်းရချင်တယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ အလိုချင်ဆုံး အချစ်ကရနိူင်မှာ မဟုတ်ဘူးလေ....
ရည်မှန်းချက်တွေ အောင်မြင်ချင်တယ်။ကိုယ့်ကို ချစ်တဲ့သူကို ပြန်ချစ်လို့ရ ရင်ကောင်းမယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင် ကိုယ်ချစ်နေ တဲ့ သူ ပြန်ချစ်လာဖို့ ဆုတောင်းချင်တယ်။လောကကြီး က ဖြစ်ချင်တာတွေ ဖြစ်ခွင့်ပေးမယ် ဆိုရင်ပေါ့။
I want to live with my family and my lover.And then i love kyawsawer.
မိသားစုတွေစုံစုံလင်လင် နဲ့နေချင်တရ်။ပြီးတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့လည်းနေချင်တရ်dar pin mal i ka akhu malaysia mar
Post By : phyo wai aung
မိသားစုတွေစုံစုံလင်လင် နဲ့နေချင်တရ်။ပြီးတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့လည်းနေချင်တရ်
Post By : yway
ပန်းချစ်တဲ့ သူနဲ့ အတူအမြန်ဆုံးနေနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းမိမှာပေါ့
Post By : ပန်း
please ! I really want live with my family.
Ko, ko naeatu tu University hmar tat khe` ya pee, Degreeatu tu tat yu khwint ya khe` yin pyaw ma pya tat ag Happy ya hmar.
Post By : Nyima
ချစ်တဲ့ မ နဲ့ အမြန်ဆုံးပေါင်းရပါစေ